Farshaxan gacmeed Gacmo gashi gacmo gashi ah oo loogu talagalay ragga leh faraha shaashadda taabashada
Gacan-gashiyadaas waxaa lagu sameeyey suede tayo sare leh oo maqaar adhijir ah oo qafiif ah. Suede dhab ah oo dhab ah oo lagu sameeyo alwaaxyo maqaar adhi ah, Dahaarka maqaarka adhiga oo raaxo leh ayaa bixiya diirimaad iyo raaxo, waara haddana se fiilooyinka dabiiciga ah waxay ka dhigayaan gacmo gashi la neefsan karo Naqshadeynta gacanta oo lagu tolay iyadoo la adeegsanayo qaab dhaqameed classically gooyaa la dhibcood faahfaahsan on dhabarka, gaar ahaan, loogu talagalay maqaar shaashadda taabashada on farta iyo bartanka, Waxaad ku raaxaysan karaan casriga ah ee cimilada qabow leh xorriyadda ● Qodobka no: MG-006 ● W ...
Gacmo gashi gacmo gashi lagu xiray oo loogu talagalay ragga leh elastics
Waxaa laga sameeyay 100% maqaar ido merino dhab ah, aad u jilicsan. Maqaarka adhiga ee dabiiciga ahi waa jilicsan yahay oo fudud yahay, si layaableh diiran oo aad u adag oo adag. waara hadana wali fiilooyinka dabiiciga ah waxay ka dhigayaan galoofyo neefsasho leh.Waxaa lagu naqshadeeyay gacanta oo lagu tolay iyadoo la isticmaalayo hab dhaqameed. classically la gooyey oo leh saddex dhibcood oo faahfaahsan dhabarka, hal elastics waa hareeraha curcurka, cidhiidhi ku habboon, oo ku habboon isticmaalka maalin kasta iyo qabow. ● Qodobka maya: MG-005 ● Dhererka dhogorta waa qiyaastii 6-10mm .. ● Midab: madow, geel iyo midabbo kale ● Afar cabbir, S / 8.5 M / 9 L / 9 ...
Classical Shem gacmeed gacmeed suede glvoes ragga loogu talagalay
Gacmo gashikan waxaa loogu talagalay meheradaha calaamadda ah. Cidhifka dhejiska waxaa lagu daboolay harag adhi ah, maqaar dheeri ah ayaa loogu talagalay in lagu muujiyo Astaanta astaanta. classically gooyaa leh saddex dhibcood oo gacanta tolidda faahfaahin si dhabarka, isku darka waa mid aad u fiican. Ka samaysan maqaar adhi dabiici ah, si layaableh diiran oo aad u adag oo adag. waara laakiin hadana fiilooyinka dabiiciga ah waxay ka dhigayaan gacmo gashi neefsashada.waa mid kuhaboon cimilada qabow rees Qodobka no: MG-003 length Dhererka dhogorta waa 6-10mm. ● Midab: madow, midab madow iyo midabbo kale ...
Laba gacmood oo gacmeed laba jibbaaran oo gacmo gashi dhogor ah
Gacmo gashi ragga, Qaabka Classical. Caan ku ahayd sannado badan, Waana la sii wadi doonaa. Waxaa lagu soo saaray maqaar adhi ah oo soojiidasho iyo raaxo leh, maqaarka idaha dabiiciga ahi waa mid jilicsan oo fudud, si layaablehna u diiran oo si adag u adag. Gacmo gashikan oo loogu talagalay gacanta oo lagu tolo iyadoo la adeegsanayo farsamooyin dhaqameed. ku habboon isticmaalka maalinlaha iyo qabowga. Qodobka maya: MG-002 ● Dhererka dhogorta waa qiyaastii 6-10mm .. ● Midab: madow, geel iyo midabbo kale ● Afar cabbir, S / 8.5 M / 9 L / ...
Galoofyo gacmo-gacmeedyo gacmeed oo gacmeed lagu farsameeyay
Ka samaysan maqaar adhi ah oo qurux badan oo raaxo leh, Harag adhi dabiici ah ayaa jilicsan oo khafiif ah, si layaableh diiran oo aad u adag oo adag. Gacmo gashikan oo loogu talagalay gacanta oo lagu tolo iyadoo la adeegsanayo farsamooyin dhaqameed. si heer sare ah loogu gooyay seddex dhibcood oo tolmo gacmeed ah oo faahfaahsan dhabarka, oo ku habboon isticmaalka maalinlaha iyo qabowga. ● Qodobka maya: MG-001 ● Dhererka dhogorta waa qiyaastii 6-10mm .. ● Midab: madow, bunni iyo midabbo kale ● Afar cabbir, S / 8.5 M / 9 L / 9.5 XL / 10, Whic ...